I-EdgeX 2.0 iza nokuthuthuka kusixhumi esibonakalayo, i-API, izinsizakalo ezintsha nokuningi | Kusuka kuLinux
Ngemuva kweminyaka ecishe ibe mibili yokukhishwa kwenguqulo yangaphambilini, Ikhishwe inguqulo entsha ye-EdgeX 2.0. Kule nguqulo entsha kwethulwa izinguquko eziningi kokungezwa kokulungiswa kwamaphutha nezibuyekezo, singakuthola futhi lokho Isixhumi esibonakalayo sewebhu senziwe ngcono, kanye ne-API yama-microservices iphinde yasebenza kabusha, phakathi kwezinye izinto.
Kulabo abangajwayelene ne-EdgeX, kufanele ngikutshele ukuthi lokhu iyipulatifomu evulekile yemodyuli yokusebenzisana phakathi kwamadivayisi, Izicelo nezinsizakalo ze-IoT. Ipulatifomu ayibophekile kuma-hardware nabathengisi bezinhlelo ezithile, futhi ithuthukiswa iqembu elizimele elixhaswe yiLinux Foundation.
I-EdgeX sfuthi ibonakala ngokuvumela ukwenziwa kwamasango axhuma amadivayisi we-IoT akhona futhi uqoqe idatha kusuka kuma-sensors ahlukahlukene. Isango linikezelwe ekuhleleni ukuxhumana namadivayisi nokwenza ukucubungula okuyinhloko, ukuhlanganiswa nokuhlaziywa kolwazi, kusebenza njengesixhumanisi esiphakathi phakathi kwenethiwekhi yamadivayisi we-IoT nendawo yokulawula yendawo noma ingqalasizinda yokuphathwa kwamafu.
Amasango futhi bangasebenzisa abalawuli be-microservice. Ukusebenzisana namadivayisi we-IoT kungahlelwa ngenethiwekhi enentambo noma engenantambo kusetshenziswa amanethiwekhi we-TCP / IP kanye nezivumelwano ezithile (hhayi i-IP).
I-EdgeX isuselwa ku-fuse evulekile ye-IoT, esetshenziswa eDell Edge Gateway yamadivayisi we-IoT. Iphrojekthi ifaka phakathi ukukhethwa kwama-microservices angaphandle kwebhokisi okuhlaziywa kwedatha, ukuphepha, ukuphathwa, nokuxazulula inkinga.
Izici Ezintsha Eziyinhloko ze-EdgeX 2.0
Kule nguqulo entsha kuyabonakala isikhombimsebenzisi esisha sewebhu esisebenzisa uhlaka lwe-Angular JS, ngazo phakathi kwezinzuzo ze-GUI entsha kukhona lula ukugcinwa nokwandiswa kokusebenza, ubukhona besilekeleli sokuxhuma amadivayisi amasha, amathuluzi wokubona ngeso lengqondo idatha, isikhombimsebenzisi esithuthukiswe kakhulu sokuphatha imethadatha, ikhono lokuqapha isimo sezinsizakalo (ukusetshenziswa kwememori, umthwalo we-CPU, njll.).
Olunye ushintsho olubalulekile olwenzekayo yilolo i-API ibhalwe kabusha ngokuphelele ukuze isebenze ngama-microservices, lokho manje akuxhomekile kuphrothokholi yokuxhumana, iphephe ngokwengeziwe, ihlelwe kahle (isebenzisa i-JSON) futhi ilandelela kangcono idatha esetshenzwe yisevisi.
Futhi Amandla Wezinsiza Zokusebenza anwetshiwe, kusukela kungezwe ukusekelwa kokuhlunga idatha yenzwa ngegama iphrofayili yedivayisi nohlobo lwezinsizakusebenza, i- kungenzeka ukuthumela idatha ngensizakalo kubamukeli abaningi futhi ubhalisele amabhasi emilayezo amaningi futhi ithempulethi ihlongozwa ukudala ngokushesha izinsizakalo zakho zohlelo lokusebenza.
Kubuye kuqhakanjiswe lokho idatha ingadluliswa isuke kumasevisi wedivayisi iye ekulondolozweni kwedatha nasezinsizakalweni zokucubungula, manje engasebenzisa ibhasi yemiyalezo (i-Redis Pub / Sub, i-0MQ noma i-MQTT) ngaphandle kokubophezeleka kuphrothokholi ye-HTTP -REST nokulungisa izinto eziseqhulwini zeQoS ezingeni lomthengisi womyalezo.
Kepha izinsiza ezintsha zedivayisi okuhlanganisiwe kuyashiwo I-COAP ngokuqaliswa kweSivumelwano Sokusebenza Esivinjelwe, I-GPIO ukuxhuma kuma-microcontroller nakwamanye amadivayisi, kufaka phakathi amabhodi we-Raspberry Pi, ngamachweba I-GPIO, I-LLRP okuwukuqalisa komthetho olandelwayo I-LLRP (Low Level Reader Protocol) ukuxhuma kumaka abafundi I-RFID ne-UART (I-Universal Asynchronous Receiver / Transmitter).
Ukwethembeka okuthuthukile namathuluzi wekhwalithi esevisi (QoS) anwetshiwe.
Imodyuli yendawo yonke isetshenzisiwe ukukhipha idatha eyimfihlo kwizitoko ezivikelekile ezifana neVault.
Nciphise inani lezinqubo nezinsizakalo ezidinga amalungelo ezimpande kuziqukathi ze-Docker. Ukuvikelwa okungeziwe ekusebenziseni iRedis kwimodi engaphephile.
Ukucushwa okwenziwe lula kwe-API Gateway (Kong).
Amaphrofayli edivayisi eyenziwe lula, lapho izinzwa nezinzwa zedivayisi zisungulwa khona, kanye nemininingwane emayelana nedatha eqoqiwe.
Okokugcina uma unentshisekelo yokwazi kabanzi ngakho, ungabheka imininingwane Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-EdgeX 2.0 ifika nokuthuthuka kusixhumi esibonakalayo, i-API, izinsizakalo ezintsha nokuningi